PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-02-11 - Intsha mayikusebenzise ukufika kukabolt nogatlin kuleli
Intsha mayikusebenzise ukufika kukabolt nogatlin kuleli
Ilanga langeSonto - 2018-02-11 - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI
UMA intsha yaseningizimu Afrika ezifela ngezokugijima ingagqugquzelekanga ngokutheleka kosondonzima bomhlaba kuleli nonyaka, cishe ngeke iphinde iluthole ugqozi.
Kungakapholi maseko elakuleli libusiseke ngokunyathela kukaUsain Bolt wasejamaica ukuzokhuthaza abafundi abagijimayo basegauteng, intsha yasemzansi seyiphinde yanyelwa yinyoni esandleni ngokuza kukajustin Gatlin ozobamba iqhaza kwi-athletix Grand Prix Series ezokuba nge- nyanga ezayo.
Empeleni ubolt nogatlin kabadingi ukuchazwa kubathandi bezemidlalo njengoba bedume umhlaba wonke. Ubolt uphethe amarekhodi omhlaba kwi-100m nakwi200m kanti ugatlin odabuka e-united States of America (USA) uvalelise kabuhlungu (ubolt) emgingqa emjahweni wakhe wokugcina elondon nyakenye.
Ukuhambela kuleli kwalezi zilomo kwelama udumo olulethelwe iningizimu Afrika ngabasubathi balapha kubalwa uwayde van Niekerk ophethe irekhodi lomhlaba kwi-400m aliqophe emidlalweni yama-olympic ngowezi-2016 erio de Janeiro, ebrazil, nocaster Semenya oyingqwele yomhlaba kwi-800m.
Uluvo Manyonga uyingqwele yomhlaba kwilong Jump.
Njengomanyonga, ugatlin uvuke wazithatha njengoba phambilini elahlwe yicala lokusebenzisa izidakamizwa kwaze kwaba yikabili.
Nokho laba basubathi bakhombisile ukuthi uma uzimisela futhi uphenduka emikhubeni emibi kusenesikhathi impumelelo iyatholakala.
Bonke lobu buhle osebubonakala kwezokugijima kuleli yimiphumela yobuholi obuqotho buka-aleck Skhosana olethe olukhulu uzinzo kwi-athletic South Africa (ASA) kusukela ethathe isikhundla sokuba ngumengameli ngonyaka wezi-2014.
Lo mholi ungene kulesi sikhundla izinto zimapeketwane njengoba beyicwile nasezikweletini kodwa wakwazi ukuyibumba kabu- sha njengoba seyibatshazwa namuhla.
Phela abagijimi bakuleli benza kahle nakwiyouth kanjalo nakumajunior okufakazelwa wukuthi elakuleli lihleli esicongweni esigabeni sabasebancane emhlabeni.
Nakuba abagijimi bakuleli benza kahle muva nje, kodwa I-ASA kusafanele ukuba inyuse amasokisi ukuvala igebe lemihlomulo etholwa ngabagijimi bakuleli uma kuqhathaniswa nezuzwa ngabaphesheya abasuke benqobe ezigabeni ezifanayo.